“Marcus Rashford wuxuu la mid noqon karaa Harry Kane” – sidaas waxaa yiri tababare Solskjær – Gool FM
RASMI: Kooxda Chelsea oo soo bandhigtay maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay martida tahay xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO
WARBIXIN: Xaaska Lionel Messi oo ka maseyrtay Shakira, Suarez oo goob-joog ahaa, Muxuuse sameeyey Gerard Piqué?
Xilliga uu David de Gea u saxiixi doono heshiiska cusub kooxdiisa Manchester United oo la shaaciyay
Lewandowski oo hal fariin u diray guddiga kooxda Bayern Munich, kahor bilaabashada xili ciyaareedka cusub
“Matthijs de Ligt waa sida Zlatan Ibrahimović” – Mino Raiola
Muxuu ahaa codsigii ay jamaahiirta Juventus weydiisteen Minio Riola markii uu maanta yimid xarunta J-Medical? Waana sheeko u xun Manchester United.
Wargeyska AS oo soo bandhigay go’aanka Dani Ceballos ee mustaqbalkiisa & kooxda ka dhisan Premier League ee u dhaw heshiiskiisa.
Miyey arintaan ka dhigan tahay in Matthijs de Ligt uusan dooneyn inuu sanado badan sii joogo kooxda Juventus?
Warbixin: Real Madrid oo laga yaabo iney Gareth Bale u ogolaato inuu si xor ah kaga tago xagaagan.
DEG-DEG: Matthijs de Ligt oo soo gaaray xarunta J-Medical si uu caafimaadka ugu maro kooxda Juventus + SAWIRO
“Marcus Rashford wuxuu la mid noqon karaa Harry Kane” – sidaas waxaa yiri tababare Solskjær
Dajiye January 12, 2019
(Manchester) 12 Jan 2019. Macalinka ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa aaminsan in Marcus Rashford uu noqon karo mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka, isla markaana uu la mid noqon doono Harry Kane.
Manchester United ayaa Axada bari ah marti ugu noqon doonto Tottenham Hotspur Wembley Stadium si ay u wada ciyaaraan kulankooda 22-aad xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
Tababare Solskjær ayaa ku qanacsan kahor kulankan in Marcus Rushford uu cadeeyn karo inuu yahay weeraryahan halis ku ah goolka hortiisa.
Rushford ayaa inta uu ka hoos shaqeenayay tababare Ole Gunnar Solskjær wuxuu dhaliyay 3 gool 4-tii kulan ee ugu dambeesay horyaalka Premier League, wuxuuna aaminsan yahay in 21 jirkan uu ka mid noqon karo mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka.
“Wuxuu noqon karaa weeraryahan weyn, waxaa suuragal ah inaan ka hadalno in Harry Kane uu yahay mid ka mid h weeraryahanada ugu fiican aduunka”.
“Waxaan hubaa in Marcus Rashford uu awoodi karo inuu gaaro heerkaas oo kale, wuxuu leeyahay awood uu ku gaari karo heerkaas”.
“Wuxuu leeyahay xawaare laga cabsado, haatan wuxuu noqday mid xoogan, waa ciyaaryahan xiiso leh in lala shaqeeyo”.
Aabaha dhalay Neymar oo ka baxay aamusnaanta, kadib markii uu ka hadlay wararka ku aadan in wiilkiisa uu ku laabanayo Barcelona
David Luiz oo ka Wanaagsan KUBBAD-SAMEEYAASHA Premier League…Arag Xaqiiqadaan ??